Cristiano Ronaldo → Man United, David De Gea → Real Madrid, Mohamed Salah → Liverpool Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qoreen Wargaysyada Caalamku – Kooxda.com
Home 2017 June Suuqa, Wararka Maanta Cristiano Ronaldo → Man United, David De Gea → Real Madrid, Mohamed Salah → Liverpool Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qoreen Wargaysyada Caalamku
Cristiano Ronaldo → Man United, David De Gea → Real Madrid, Mohamed Salah → Liverpool Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qoreen Wargaysyada Caalamku
June 17, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda Man United ayaa ah meesha ugu cad-cad ee uu Cristiano Ronaldo ka ciyaari doono Xilli Ciyaareedka dambe xilli uu isku diyaarinayo in uu isaga tago kooxda xagaagan (The Sun).
Carlos Tevez ayaa ku soo jeeda in uu dib ugu soo laabto horyaalka Premier league kadib markii uu jirtay in uu doonayo in uu isaga boxo iyo kooxaha Everton,West Ham oo isku baacsanaya (The Sun).
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in ay miiska saarto rikoorkii ugu qaalisanaa suuqeeda iyo waliba Olivier Giroud si ay u hesho Kylian Mbappe (The Sun).
Kooxda chelsea ayaan diyaar u ahayn in ay iska fasaxdo tababareheeda Antonio Conte waxana ay diyaar u tahay ay siiso lacag dhan 250 Milyan oo uu suuqa uga soo adeegto xagaagan (Daily Mirror).
Kooxda Hanatay champions League ayaa sidoo kale qarka u saaran in ay ku dhawaaqdo saxiixa Goolhayihii hore ee kooxda Man City ee Willy Caballero (Daily Mirror).
Xiddigaha Alexis Sanchez and Mesut Ozil ayaa la filayaa in ay xilli ciyaareedka dambe ku sii sugnaan doonaan kooxda Arsenal kadib markii la arkay labadan xiddig oo ka qayb qaatay soo bandhiga maaliyada cusub ee xilli ciyaareedka dambe oo la soo dusiyay (Daily Mirror).
Man United ayaa qarka u saaran in ay todobaad gudihii dhamaystirto saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Inter Milan ee Ivan Perisic (Daily Mail).
Goolhayaha kooxda Man United ee David De Gea ayaa bilaabay in uu guri ka raadsado Spain xilli uu isku diyaarinayo in uu xagaagan isaga tago kooxda Man United (Daily Star).
Jose Mourinho ayaa diyaar u ah in uu Kooxda Real Madrid isugu daro lacag iyo Goolhaye David De Gea hadii ay Real Madrid u ogolaanayso saxiixa Alvaro Morata (Daily Express).
Kooxda Man United ayaa loo sheegay in ay miiska saaraan lacag dhan 50 Milyan oo euro hadii ay doonayaan in ay helaan saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Tottenham ee Eric Dier (Daily Telegraph).
Kooxda Arsenal ayaa hogaanka u qabatay baacsiga loogu jiro xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Ac Milan ee M’Baye Niang (Transfer Market).
Kooxda Liverpool ayaa 60 Milyan oo Lacag ah gacanta ku dhigi doonta marka ay iibiso xiddigaha Alberto Moreno, Mamadou Sakho and Lazar Markovic (The Times).
Ka Tagitaanka Crsitaino Ronaldo ee Kooxda Real Madrid oo caqabad ku noqon kara in ay Man United waydo saxiixa xiddiga reer Spain ee Alvaro Morata (Independent).
Xiddiga diirada u saaran kooxda chelsea ee Alex Sandro ayaa lagu soo waramayaa in uu kooxdiisa Juventus isaga oo ka codsaday in laga iibiyo kooxda Chelsea (calciomercato).
Mohamed Salah oo la filayo in uu maalmaha soo socda tijaabada caafimaadka u maro kooxda Liverpool si uu u dhamaystiro ku biiristiisa kooxda Liverpool (yallakora)